Erna iyo Siv oo furiinkii kadib, maanta isaga horyimid dooda baarlamaanka Norway. - NorSom News
Erna iyo Siv oo furiinkii kadib, maanta isaga horyimid dooda baarlamaanka Norway.
Wasiiradii dhawaan xilka wasaarada maaliyada wareejisay ee Siv Jensen oo dhawaan kusoo noqotay shaqada baarlamaanka iyo madaxa xukuumadii ay ka tirsaneyd ee reysulwasaare Erna Solberg, ayaa maanta isaga horyimid dood baarlamaanka ah.
Siv Jensen oo uu ka muuqato nasasho xoogan ayaa saaka lasoo shir-tagtay eedeyn culus oo ay u waday xukuumadii ay ka tirsaneyd isbuucyo kahor. Waxeyna dooda maanta ku saabsaneyd siyaasada cimilada ee xukuumada Erna Solberg.
Dooda labadan siyaasi ee miisaanka culus ku leh Norway ayaa aheyd mid aan lagu arkin hoolka baarlamaanka Norway lixdii sano ee lasoo dhaafay. Waxeyna dad badan soo xusuusisay sababtii ay Frp u doorteen inay xukuumada uga baxaan oo aheyd inay boorka ka jaftaan mashruucii mucaaradnimada. Ayna iska dhigaan dad danbi la´aan oo aan waxbo ka ogeyn wixii wadanka ka dhacay lixdii sanadood oo ay xukuumada ka tirsanaayeen.
Xigasho/kilde: Halkan ka daawo: Siv Jensen med stikk til Erna Solberg under spørretimen: – Svaret er ganske oppsiktsvekkende.
Previous articleOslo: Booliska oo raadinayo rag jirdil u geystay nin soomaali ah.
Next articleMaxkamad diiday racfaanka ninkii loo xukumay shaqaaleysiinta qoxootiga.